ကျန်းမာရေး – Page2– May Sharing
ချွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ အာရုံကြော အားနည်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်မူးဝေခြင်းဖြစ်လျှင် ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါ
May 19, 2020 Dr Mrs Mg
ခေါင်းက ချွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ အာရုံကြော အားနည်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်မူးဝေခြင်းဖြစ်လျှင် ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါ ကျွန်တော် အာရုံကြောအားနည်း ခေါင်းချွေးတအားထွက် ဝမ်းချုပ် မူးဝေတာတွေတော့ အခုဘာဆေးမှ၊ သောက်စရာမလိုလောက်အောင် ဒီပျားသံပုရာကို လုပ်စားကြည့်လာတာ အတော်လေးအဆင်ပြေသွားပါပြီ။ ခေါင်းချွေးများထွက်လာပီဆိုဘာမှ မလုပ်ချင်လောက်အောင်စိတ်ပျက်မိတာ ပျားရည်တော့စစ်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်။အရမ်းကောင်းတယ် မနက်အိပ်ယာထချင်းပျားသံပရာစားပြစ်တယ် မုန့်ှဟင်းငါး ငံပြာရည်ချက် ငပိရည် အခုအကုန်စားတာ သွေးတိုးချင်း
May 17, 2020 Dr Mrs Mg
သွားတွေ ပျက်စီးရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းများ သွားတွေ ပျက်စီးနေတဲ့ လူတွေဟာ ရေခဲသောက်တာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရေခဲမုန့် စားတာ ဖြစ်ဖြစ် သွားတွေ နာကျင်တာမျိုးကို ကြုံဖူးမှာပါ။ သွားမကြာခဏ ကိုက်တဲ့အခါမှာလည်း အစားပျက် အသောက်ပျက်နဲ့ စိတ်ညစ်ဖို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွားတွေ ပျက်စီးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကို
အရွယ်နုပျိုဆေးသဖွယ် အားကိုးထိုက်တဲ့ “ဗန်ဒါသီး”စေ့
March 15, 2020 Dr Mrs Mg
အရွယ်နုပျိုဆေးသဖွယ် အားကိုးထိုက်တဲ့ “ဗန်ဒါသီး”စေ့ မြန်မာပြည်မှာ ဗန်ဒါပင်(ဗန်ဒါသီး)လို့အလွယ်ခေါ်လေ့ရှိတာကြောင့်၊“ဗာဒံပင်” ဆိုတဲ့ သူ့မူလအမည် ပျောက်ကွယ်နေပါတယ်။အင်္ဂလိပ်အမည်ကတော့ Indian Almond ပါတဲ့။ ဗာဒံစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူနဲ့တည့်တယ်၊ ကျန်းမာရေးကောင်း တယ်၊ အသားအရေကို ကောင်းစေတယ်စတဲ့အခြေခံ ဗဟုသုတလောက်တော့လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ သို့သော် ဗာဒံစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ ကျန်းမာရေးအကျုိးကျေးဇူးတွေ ဘယ်လောက်တောင်များပြားတယ် ဆိုတာသိနိုင်ကြပါစေရန် မျှဝေရေးသားလိုက်ရပါ တယ်။ ဗာဒံပင်ကအကြီးမြန်ပြီး၊အရွက်တွေ
ဒူးနာနေပီး ဆေးရုံသုံးခါတက်ပြီးတာတောင် မပျောက်လို့ ဒီနည်းလေးနဲ့မှ ပျောက်သွားတယ်
March 9, 2020 Dr Mrs Mg
ဒူးနာနေပီး ဆေးရုံသုံးခါတက်ပြီးတာတောင် မပျောက်လို့ ဒီနည်းလေးနဲ့မှ ပျောက်သွားတယ် ဆေးနည်း ★★★ ဂျင်းနဲ့မြေဖြူကိုသာ ရောထောင်းပီးလိမ်းလိုက်ပါ။ ဆေးရုံ ၃ လတက်တဲ့လူတောင် ၃ရက်ပဲလိမ်းတာဒူးနာပျောက် သွားတယ် ။ ကျတော့်ယောက္ခမ ၃ ပတ်လောက်ဒူးနာနေတာ ၂ ရက်ပဲလိမ်းတာပျောက်သွားပီ ငွေနှစ်ရာလောက်ပဲကုန်ကျပါတယ်ဗျာ ကုသိုလ်ရချင်ရင် shareကြပါ လို့။ Create-Han Htal Oo
March 1, 2020 Dr Mrs Mg
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါကို သက်သာစေတဲ့ ပန်းမုန်လာစိမ်း ပန်းမုန်လာစိမ်း (Broccoli) မှာပါဝင်တဲ့ ဓာတ်ပေါင်းတစ်မျိုးဟာ အဆစ်အမြစ်ရာင်ရောဂါကို သက်သာစေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိတယ်လို့ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆစ်အမြစ်ရောင် ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ OA ရောဂါဟာ အဆစ်အမြစ်တွေ ရဲ့ အရိုးနု Cartilage ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာရတာဖြစ်ပြီးအဆစ်အမြစ်နာကျင်ခြင်းနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ခက်ခဲခြင်းတွေကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကို လေ့လာရပါတယ်။ဒီမှာ
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ကိုပေးတဲ့ စွန်ပလွန်သီး
February 28, 2020 Dr Mrs Mg
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ကိုပေးတဲ့ စွန်ပလွန်သီး စွန်ပလွန်သီးကို ငယ်စဉ်အရွယ်အခါ စာရေးသူမြန်မာပြည်မှာနေထိုင်စဉ်က အကြိမ်အနည်းငယ်မျှစားသုံးဖူးပါတယ်။ ယိုထိုးထားတဲ့အတွက် ချိုအီဆိမ့်တဲ့အရသာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ထက်ပိုပြီးစိတ်မဝင်စားမိခဲ့ပါဘူး။ စင်္ကာပူမှာနေထိုင်စဉ် စာရေးသူရုံးမှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်မိတ်ဆွေ(ကျား/မ) ဥပုဒ်ဖြေချိန်မှာစားသုံးတာတွေ့မိပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါတောင်းယူစားသောက်မိပါတယ်။ ထို့ထက်ပိုပြီးစိတ်မဝင်စားမိခဲ့ပါဘူး။ ဒီနေ့တော့ ရုံးအားလပ်ရက်ဟင်းချက်စရာဈေးဝယ်ထွက်ရင်း အမှတ်မထင်စွန်ပလွန်သီးယိုအထုပ်ကို ဈေးမှာတွေ့လို့ကိုင်ကြည့်မိရင်း သူရဲ့ Nutrition Fact လို့ခေါ်တဲ့
အခွံမှာ အစက်အပြောက်တွေနဲ့ ငှက်ပျောသီးက ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ဖျက်နိုင်
February 27, 2020 February 27, 2020 Dr Mrs Mg
အခွံမှာ အစက်အပြောက်တွေနဲ့ ငှက်ပျောသီးက ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ဖျက်နိုင် ငှက်ပျောသီးက ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူကြိုက်အများဆုံးအသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငှက်ပျောခွံမှာ အစက်အပျောက်တွေဖြစ်လာတာ ညိုမဲလာတာနဲ့ လွင့်ပစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိ အစက်အပျောက်တွေရှိနေတဲ့ ငှက်ပျောသီးမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများအပြားရှိနေပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီငှက်ပျောသီးကို တစ်နေ့ ၂
February 27, 2020 Dr Mrs Mg
ကျီးပေါင်းအတွက်အကောင်းဆုံးမိဿလင်ကြပ်ထုပ် ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် …. ပိတ်စအဖြူ…ချည်ထည်အကြမ်း အဖြူရောင်တစ်ကိုက်ဝယ်ပာ(ကြပ်ထုပ်၃ထုပ်စာရသည်)မိဿ လင်အမှုန့်..အကြမ်းပန်းကန်တစ်လုံးစာကို..ပိတ်စနှစ်ထပ်ဖြင့်ထုပ်ရမည်။အတွင်းခံပိတ်စ..(၁၁)လက်မပတ်လည်။အပြင်ခံပိတ်စ(၁၄)လက်မပတ်လည်ထုပ်ရပာမည်။ နှစ်ကြာခါးနာ။ဇက်ကြောတက်ဝေဒနာသည်များ။ဆောင်းရာသီတွင်အအေးပတ်လျှင်ခေါင်းမူးတတ်သူများအတွက်..ရေနွေးငွေ့ဖြင့်အပူပေး၍အချိန်မရွေးကြပ်ထုပ်ထိုးပေးနိုင်ပါသည်။ အထုပ်နှစ်ထုပ်ပြုလုပ်ပြီးတစ်လှည့်စီ နာရီဝက်ခန့်ထိုးပါ။ မုံညှင်းဆီ၊နှမ်းဆီအရင်လိမ်းပြီးမှထိုးလျှင်ပို၍ချောမွေ့ပါသည်။ ဆေးခန်းသွား၍ငွေကုန်ခံမည့်အစားမိမိအိမ်တွင်သက်သာမည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ မိဿလင်တစ်မျိုးတည်းနှင့်ကျီးပေါင်းပြေ။ဒဏ်ကျေစေနိုင်ပါသည်။ပရဆေးဆိုင်မှာမိဿလင်ဥဝယ်ပြီးအမှုန့်ကြိတ်အပ်လိုက်လျှင်ရပါသည်။ အခိုးထွက်သည့်ပိတ်စအကြမ်းကိုအသုံးပြုပါ။ ဇက်ကျီးပေါင်း။ခါးဆစ်ကျီးပေါင်းကို မိဿလင်ကြပ်ထုပ်ထိုးပြီးလျှင် သင်္ဘောရွက်ကိုပျော့အောင်ရေနွေးခဏစိမ်ပြီးကပ်ပေးပါ။ ကျီးပေါင်းတဖြည်းဖြည်းပါ:သွားပါလိမ့်မည်။ဆေးပူတွေအမြဲမလိမ်းပါနှင့်။ပရုပ်ဆီမလိမ်းပါနှင့်။ပူလျှင်ယားလျှင်သနပ်ခါးမြစ်နှင့်ဆားသွေးလိမ်းပါ။ ဆရာကြည်လွင်မြင့် မုဒြာ UNICODE ကြီးပေါငျးအတှကျအကောငျးဆုံးမိဿလငျကွပျထုပျ ပွုလုပျပုံအဆငျ့ဆငျ့ …. ပိတျစအဖွူ…ခညျြထညျအကွမျး အဖွူရောငျတဈကိုကျဝယျပာ(ကွပျထုပျ၃ထုပျစာရသညျ)မိဿ လငျအမှုနျ့..အကွမျးပနျးကနျတဈလုံးစာကို..ပိတျစနှဈထပျဖွငျ့ထုပျရမညျ။အတှငျးခံပိတျစ..(၁၁)လကျမပတျလညျ။အပွငျခံပိတျစ(၁၄)လကျမပတျလညျထုပျရပာမညျ။ နှဈကွာခါးနာ။ဇကျကွောတကျဝဒေနာသညျမြား။ဆောငျးရာသီတှငျအအေးပတျလြှငျခေါငျးမူးတတျသူမြားအတှကျ..ရနှေေးငှဖွေ့ငျ့အပူပေး၍အခြိနျမရှေးကွပျထုပျထိုးပေးနိုငျပါသညျ။ အထုပျနှဈထုပျပွုလုပျပွီးတဈလှညျ့စီ နာရီဝကျခနျ့ထိုးပါ။
လည်ပင်း (ကျီးပေါင်း)မတက်အောင် သတိထားရမဲ့အချက်များ
February 26, 2020 Dr Mrs Mg
လည်ပင်း (ကျီးပေါင်း)မတက်အောင် သတိထားရမဲ့အချက်များ အခုခေတ်မှာ လူအတော်များများဟာလည်ပင်းကျီးပေါင်းရောဂါဖြစ်လာကြပါတယ်။ လည်ပင်းကျီးပေါင်းရောဂါကို ဆေးပညာအရ Cervical spondylosis လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဂုတ်ပိုး(ဇက်နေရာ)ကနေ တင်ပါးနေရာလောက်ထိ ကို Vertebral Column လို့ခေါ်တဲ့ ကျောရိုးမကြီးကနေ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ထိုကျောရိုးမကြီးမှာ အရိုးအဆစ်ပေါင်း၃၃ခုပါဝင်ပါတယ်။အရိုးအဆစ်တခုနဲ့တခုကြားမှာ အရိုးနုပြား(Intervertebral Discs)လေးတွေရှိပြီး ကျောရိုးဆစ်တွေရဲ့အလယ်ကနေ Spinal Cord
အိပ်ယာထောင့်မှာထားမယ့် သံပုရာသီး၏အစွမ်းသတ္တိများ ဝေးဝေးပြေးပါ အဆိပ်သတ္တဝါ …. လူတွေဟာ အိပ်ရာဝင်တဲ့အခါ တစ်ခါတစ်ရံ အခံရဆိုးတဲ့ ကြမ်းပိုးကိုက်ခြင်းကိုလည်း ခံရတတ်ပါသည်။ ပုရွက်ဆိတ်လို အကောင်အသေးစားမျိုးလည်း အိပ်ရာပေါ်တက်လာတတ်သလို အဆင်မသင့်ရင် အဆိပ်ရှိ သတ္တဝါတွေလည်း(နေရာ၊ ဒေသကိုလိုက်လို့) တက်လာတတ်ပါတယ် ဒီလိုဖြစ်ရင်တော့ မိမိအိပ်တဲ့ ခုတင်အပေါ်ထောင့်လေးထောင့်မှာ သံပုရာသီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် တစ်လုံးစီ